ဝိုင်းစုရဲ့ စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုခဲ့မယ်ဆိုရင် | Mandalaygazette's Weblog
Other - Non Channelized March 23, 2010 Comments: 136
မန္တလေးမှာ မကြာသေးမီက Red Cat ၀ီစကီ အရောင်းမြှင့်တင်မှု ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က နာမည်ကျော် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဆိုတော်တွေ လာရောက်သီဆိုဖျော်ဖြေကြ ရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်အတွင်း တစ်ဟုန်ထိုး နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များလာတဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စင်မြင့်ပေါ်မှာ ၀ိုင်းစု ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး သီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့သလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီး မြင်တွေ့နိုင်စေဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။အသံအားကောင်း ပြီးသား အဆိုကောင်းပြီးသား ၀ိုင်းစုဟာ သူမရဲ့သွယ်လျလျပေါင်တံတွေကို ပြစရာလို လို့လား လို့ တချို့ကဝေဖန်ကြတယ်။တချို့ကတော့ သူမရဲ့ စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုမယ် ဆိုရင် ဘာပြောကောင်းမလဲလို့လည်း မချင့်မရဲဖြစ်ခဲ့ကြပါသတဲ့။
← House Passes Historic Health Bill
136 thoughts on “၀ိုင်းစုရဲ့ စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုခဲ့မယ်ဆိုရင်”
Tunn Linn March 23, 2010 at 4:34 am Reply
ကြိုက်တယ်ဗျာ ဒီထက်ပို တိုပါစေလို့ ။
notsynthetics March 23, 2010 at 12:44 pm Reply
ကူးကူး March 23, 2010 at 5:57 pm Reply
အဆိုတော် ထူးအံ့ March 23, 2010 at 6:14 pm Reply
မြန်မာယဉ်ကျေးမှူ့အ ရကြည့်ရရင်ဒါဟာ မကောင်းပါ…ခောတ်ဆန်တာကောင်းပါတယ်
ကိုကိုယောက်ကျားတွေ ရဲ့ ကာမ မီးကို တောက်လောင်စေ တာ ငရဲကြီးစေ တယ်နော်
နောင် ဘ၀ ဆိုတာမ ကြောက် ရင်လုပ် ပါ။ အမိနဲ့အဖ မောင်နဲ့နှမ ယဉ်ကျေးမှူ့ ကို မဖျက်စီးဖို့
နအဖ ဘယ်မှာသွားနေ နေ လဲ?
lin lin March 24, 2010 at 1:48 am Reply
ပေါင်လေးတွေ့ရုံနဲ့ ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုတဲ့ နှာဗူးတွေလည်းရှိမှာဘဲ…
koko March 24, 2010 at 10:10 am Reply
စောက်ဖုတ်ပေါ်တော့မယ်ဝိုင်းစုရေ… နင်ကြောင့်ကိုကိုတို့တော့ ဟင်းဟင်းတနေရတယ်
အပြင်သွားရင်တစ်ယောက်တည်းမသွားနဲ့… ဘာလုပ်ခံရမလဲသိလား (မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော်ရုံတန်ရုံဆိုတော်ပြီပေါ့)
Thein March 24, 2010 at 6:34 am Reply
အခုလိုကြည့်ရရင်တော့ အနုပညာ မျက်စိနဲ့ မကြည့်နိုင်ပါဘူး….ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပဲ စဉ်းစားမိမှာပါ…အခုနောက်ပိုင်း ဆိုးလာမှာပေါ့ သူက တစ်မျိုးတောင် ဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားမိတာပဲ… သိချင်ရင် စုံစမ်းပေါ့…..
ဖိုးတုတ် March 24, 2010 at 9:44 am Reply
ဗြိတိန်မှာ မဒိန်းမှုတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလည်းဆိုတာ စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ တရားခံတွေဟာ မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်…မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဒီလို တိုနံ့နံ့တွေ ရှက်ပေါ်လော်လီတွေ ၀တ်မှုကြောင့် ယောင်္ကျားတွေဟာ မနေနိုင်ကြပဲ မဒိန်းမှုတွေဖြစ်ကြတာပဲ…အနုပညာစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့သူက ယောင်္ကျား ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက်တောင် ရှိရင် ကံကောင်း…ဒါက အပေါ်က lin lin အတွက်ပါ
ဂဂဠဏ ကျား ဆိုမှ ကျား March 24, 2010 at 5:47 pm Reply
lin lin ဆိုတဲ့ကောင်ကပိုဆိုးမဲ့ ကောင်အနုပညာဘာညာရှောက်ပြောနေ
မင်း က နုပညာအကြောင်းဘယ်လောက်နားလည် လို.လဲ?မင်း ဟာရဟန်း
သူတော်စဉ်မှ မဟုတ် တာ အပုန်း နှာဘူး ဘဲဖြစ် ရ မယ်…..စိတ်ထဲမှာတော့
သွားရည်တမျှားမျှား ဖြစ်နေ တဲ့ကောင် က များကြောင် သူတော်ကြွက် သူခိုး လုပ်နေ တယ်
တို.ကဆော် ကားပြီးပြောနေ တာ မ ဟုတ်..ဝိုင်းစုကို က အဆော်ကားခွင့်ကိုဖိတ်ခေါ်နေ သလိုလုပ်နေကို
ပြောနေတာ။ဟေ့ကောင် ခောတ် တခုပြောင်းသွားပေ မဲ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟာယဉ်ကျေးမှူ့ဘဲ…မင်းညီမကိုအဲ ဒီ
လို ဝတ်ခိုင်းလိုက်(ဥပမာ ပေးတာ)တို့ယောက်ကျားတွေဝိုင်းကြည့်မယ် ဟိုပြောဒီင်္ပြောလုပ်မယ်ကွါရမလား?
အပြောကတော့ သီလသမာဓိရှိ သလို၊အနုပညာမျက်စိရှိ သလိုနဲ့ အပုန်းနှာဘူးဇတ် ခင်းမဲ့lin lin လိူကောင် တွေ
ပို ဆိုး မယ်ဟေ့……..။
FighterDJ March 24, 2010 at 9:21 pm Reply
aaa March 25, 2010 at 3:01 am Reply
2010 March 25, 2010 at 4:26 am Reply
who cares? do whatever u want to do… go for it…
lu min March 25, 2010 at 6:09 am Reply
inn lu pyaw myar nay pi main ka lay…..kyi loat kyi loat….a wel taw tawy like lar pi
တောင်တီး March 25, 2010 at 7:42 am Reply
သူတို့ကိုက အဲလို ပြချင်နေကြတာ ကျားတွေရဲ့ စိတ်တွေကို ဆွပေးနေကြတာပဲ၊ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ပြီး ဆိုလဲ ဒီသီချင်းပဲဟာ လွန်ကျူးမှုတွေဖြစ်အောင် လမ်းစဖေါ်ပေး နေသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဝိုင်း အာ ခံနေရတာတောင် နည်းသေး
childish March 25, 2010 at 8:09 am Reply
သူ့ ဖင်နဲ့ သူဖော်တာ။ နင်တို့ စောက်ရေးစောက်ရာ ဘာပါလဲ။ မကျေနပ် သူ့ လို ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့။ စောက်ရေးမပါတာတွေလာပြောနေတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိလို့ ကိုယ်ဖော်တာ။ နင်တို့ စောက်ပူ ဘယ်နှစ်ပြားပါလို့ လည်း။ ကြည့်နိုင်ရင် ကြည့် မကြည့်နိုင်ရင် မျက်စိမိတ်နေပေ့ါ။ အလကား။ လာပြီး မနာလို တိုရှည် ဖြစ်နေကြတယ်။
wai March 25, 2010 at 6:19 pm Reply
ဒီလို အခြေအနေတွေကို လည်း နအဖ ကို လုံးလုံး အပြစ် မမြင်နဲ့ အုံးလေ…. စည်းကမ်းထုတ်ပြီး တင်းကျပ်လိုက်ရင် ရန်ကုန်သူ ၅၀ % အနေအထိုင် ခက် ကုန်မှာပေါ့ဗျာ…. ငဲငဲ ဧဲ ဧဲ …ဒီလို မ၀တ်ရဘူးလို့ပိတ်ပင်လိုက်ရင် ဒီအစိုးရ လက်ထပ် လူ့ အခွင့်အရေး အပြည့်မရဘူးလို့ မလိုသူတွေက ပြောနေပါ့အုံးမယ်ဗျာ..ဒီမိုကရေစီ မရသေးလို့ တော်သေးတာပေါ့.. ရပြီးတဲ့အခါ ဆို၇င်တော့ အော်ကျွှန်ုပ် တို့မြန်မာ အမျိုးသမီးများ ကို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့ ရမယ် ဆိုတာ.. တွေးကြည့်ရင် ရင်လေးပါဘိ ….. သူ့မိးသားစု.. သူ့ ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေက ခွင့်ပြုလို့ဝတ်တာဆိုတော့.. ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ယဉ်ကျေးမှုအရ ဒေါသ ထွက်ရပေမဲ့… လုံးလုံး အပြစ်မြင်လို့ မရဘူးပေါ့….. အဓိက ကတော့ ခေတ်မှီတာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခွဲခြားတတ်ဖို့ ပါဘဲ….
ဖိုးတုတ် March 25, 2010 at 9:23 pm Reply
မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေဟာ အပြိုင်ဆိုင် ကျော်ကြားဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြရာမှာ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့က ယောင်္ကျားတွေအကြိုက် sexy ရှိရှိ လုပ်တတ် ၀တ်တတ်တဲ့သူတွေက ပိုပြီး ထင်ပေါ်တာတွေ့ရတယ်…ဒါကြောင့်လည်း ဒီအချက်ကိုသိတဲ့ သူတွေက ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို ခဏထောက်ထား ကြော်ကြားဖို့အတွက် sexy ကျကျလုပ်ပြနေတာတွေတွေ့ရတယ်…စိတ်မကောင်းစရာက ဒါဟာ အနုပညာကောင်းသမားမဟုတ်ပဲ မိမိနာမည်ကြော်ကြားချင်လို့ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့လိုက်တာလို့ပဲမြင်မိတယ်…အားပေးတဲ့ ယောင်္ကျား တွေကလည်း အဲဒီမိန်းကလေးအပေါ်ကို တဏှာရာဂ စိတ်တွေနဲ့ပဲကြည့်ပြီး အချိန်တိုင်း အခွင့်ရေးကိုစောင့်နေတဲ့အတွက် အဲဒီမိန်းကလေးတွက် အန္တရယ်ကြီးလွန်းပါတယ်….ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် မိမိအတွက် ဈေးကောင်းရဖို့အတွက် ဈေးခေါ်တာဆိုရင်တော့ မပြောလိုပါဘူး….နာမည်ကြီးမှု ကျော်ကြားမှုဆိုတာ တစ်သက်လုံးထိန်းထားဖို့ခက်ယဉ်းပါတယ်….သူ့ခေတ်သူ့အခါကုန်ဆုံးသွားရင် အဲဒါတွေက မှေးမှိန်သွားမှာပါ…အဲ တစ်ခုရှိတာက အမြဲတမ်း တစ်သက်လုံး ဘယ်ခေတ်ခါမှ မပျက်စီးသွားတာက ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်သီလ ဂုဏ်သိက္ခာပဲ…ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့ပဲ….
အဖ March 26, 2010 at 12:13 am Reply
childish စကားပြော တာ ကို ကအရိုင်းအဆိုင်း2010 ဆိုတဲ့လူလဲဒီလိုဘဲအမိယုတ် နှူတ်ကြမ်းတဲ့
မိမဆုံးမသားသမီးတွေများလား?mandalay gazette ရေဒီလိုcomment တွေကို အရေး ယူဆောင် ရွက် ပေး ပါ။
၀ိုင်း March 26, 2010 at 10:03 am Reply
ရေးလာကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေ အားလုံးကတော့ လူ တို့ ရဲ့ မတူညီတဲ့ ခံယူချက်တွေကို ဖော်ပြကြတာပေါ့ဗျာ….. ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း အပြစ်လုံးလုံး ပုံချလို့ မရသလို အမျိုးမျိုး ရေးသွားတဲ့ လူတွေကိုလည်း အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး… အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်လာတာပါ… ကျွန်တော်လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို အပြုမူမျိုးမြင်ရင်တော့ …………… ? …ဒါတွေထားပါတော့.. အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ပြစ်ပြီးတဲ့ အရာတစ်ခုကို အပြစ်ဝိုင်းမတင်ကျဘဲ နောက်နောင် ယဉ်ကျေးမှုအရ မပြုမူဖို့နားလည်အောင် ပြောပြရင်ဘဲ သဘောပေါက်ကြမှာပါ.. ကျွန်တော် ကတော့ ကွန်မန့် တွေ အားလုံးကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်မှု တစ်ခုတော့ ရရှိပါတယ်… ဒိကလေးမလေးကို ပြစ်တင်ဝေဖန်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်မဟုတ်ဘူးနော်..
၀ိုင်း March 26, 2010 at 10:04 am Reply
ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီကွန်မန့် ရေးသူတွေရဲ့ အဓိက စိတ်ဆန္ဒကတော့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်နေလို့စေတနာ ဒေါသ နဲ့ ပြောတာဆိုတာ ပါဘဲ…အခုလို ရေးချင်တာ ရေးချလိုက်တဲ့ အတွက် တဖက် လူကို ထိခိုက်သွားပေမဲ့ တကယ်တမ်း သူတို့ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အချက်ကတော့ မြန်မာသွေး. မြန်မာယဉ်ကျေးမှု အပြည့်ရှိနေလို့ဒီလို မြင်ကွင်းကို အပြစ်တင်ကြတာဆိုတာ အားလုံး အသိဖြစ်မှာပါ… ကွန်မန့် တွေရေးပေးတဲ့ လူတွေရဲ့အတွင်းခံစားချက်ကို ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ မြန်မာ ပီပီသသ နဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တယ်လို့ ဘဲ မြင်မိပါတယ်… ဒီအပြုအမူနဲ့ ဒီ လို ကွန်မန့် တွေကို တွေ့ ပြီး နောက်တစ်ချိန် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူး ပုံသဏ္ဍန် တွေကိုေ၇ှာင်ရှားနိုင်ကြပါစေ…
timothy March 26, 2010 at 12:23 pm Reply
gazette should not allow some of the comment seen here. If it had been written in common language, I am afraid our burmese culture and sensitivity would be criticized by the global audience. this is not burmese way to comment on whatever short skirt one chose to wear at the function. These comments should never appeared on public domain where everyone can see. Editor of the Gazette should ban this kind of rudeness which can effect the burmese culture negatively.
lu min March 26, 2010 at 1:23 pm Reply
I agree timothy comment because childish comment is very very rude ..Editor please remove childish comment from this comment list
phoothar March 27, 2010 at 5:52 pm Reply
တော်တော်လေးပြည့် ပြည့် စုံစုံပြောထားကြာတာပဲ
ုkoehtan March 27, 2010 at 9:07 pm Reply
အပေါ်ကစာတွေကြည့်ရယုံနဲ့ တင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။၀ိုင်းစုခိုင်းသိန်းကိုဝေဖန်တာတွေထက်မင်းတို့ စာမင်းတို့ ဖတ်ပြီးကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်သိကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ီမင်းခ March 28, 2010 at 6:48 am Reply
် ၀ိုင်းစုရေ အစကတော့ချစ်တယ်အခုတော့ sexy ကျလာတော့မချစ်တော့ဘူး 😛 ဒီကြားထဲ command ပေးတာတောင် နအဖ ကပါလာသေး သူဖင်တက်လိုးနေတာကျနေတာပဲ ဥပဒေအရပိတ်ပင်တော့ လူအခွင့်အေ၇း ဆုံးရူံးတယ်တဲ့ အခုဒီမိုကရေစီမရသေးလိုပါ ရရင်စောင့်ကြည့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေလည်း ထိုင်းနဲထူးမခြားနားပဲ အဲဒီအခါကျမှ ယာဉ်ကျေးမူအရ ဒေါသမထွက်ကြနဲ့နော် ဒါကလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေကိုအားကိုးမှတော့ သူတို့ယာဉ်ကျေးမူပဲရမှာပေါ့ စောင့်ကြည့်နော် မင်းတို့သားသမီးတွေလက်ထက်ကျရင် နိုင်ငံကိုဘယ်သူပဲအုပ်ချူပ်အုပ်ခူပ် ကိုယ်ယာဉ်ကျေးမူမပျောက်ရင်ပြီးတာပဲ စားဝတ်နေရေးပြေလည်၇င်းပြီးတာပဲ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေပြီးတော့ စားဝတ်နေေ၇းပြေလည်ရေး … ဒိုအေ၇း တဲ့ရယ်ဖို့ကောင်းတယ် သူများက ဒို့အရေးဆိုတာနဲ့ လိုက်ပြီးတော့ အော်နေတာ ထမင်းဝသွားလား …ဒီမိုကရေစီရလည်း ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာ ဘယ်သူမှလာမကျွှေးဘူး အဲ မိဘကလွဲလိုပေါ့ ပြောရင်းဆိုရင်းတောင်နိုင်ငံရေးတွေပါလာပြီ ၀ိုင်းစုေ၇ ရုပ်ကလေးကလှပါတယ်ဆို ကိုယ်ကို့ကို မဖျက်နဲ့လေ ကောင်မလေး နောက်ဆို အနေအထိုင်ဆင်ခြင် ခတ်ဆန်တာ ကောင်းပေမယ် Sexy ကျသွားရင်မကောင်းဘူး … ဝေဖန်တာနော် ကိုယ်လုပ်ချင်မှဖြစ်တာ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ၀ိုင်းစုပရိသတ်ပါ…. 😀
ကိုသွင် March 28, 2010 at 2:04 pm Reply
lulay March 28, 2010 at 3:18 pm Reply
ကြိုက်တယ်ကွာ။တပုံတည်းတော့ အားမရဘူး………နောက်ထက်ရှိသေးရင် ထက်တင်လိုက်ပါအုံး။
မင်းနားလည်လား အဲဒါ မင်းကြောင့်ကွ……………………
အဖ March 28, 2010 at 4:04 pm Reply
ဟေ့ကောင်မင်း ခ ထမင်း ဝလို့ နအဖ အလိုကျ မြန်မာပြည် သားအချင်းချင်း မိုက်ရိုင်းပြ စရာ မလို ပါ။
အဖ ဆို တဲ့လူက အမှန်တရား နဲ့ယဉ်ကျေးမှူ့ကို လေးစားတယ် နအဖအ ကြိုက်တော့ မပြောနဲ့။
နိုင် ငံရေးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်းပြည်ထဲ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ရှိ သူကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူ မှာ တာ ဝန်
ရှိ တယ် ဒီမို မှ ကွန်မြူ မှ မဟုတ်ဘူး commentွရေးသားတွေ ကို ဖတ်ရခြင်းကြောင့် မြန် မာဆိုတဲ့ လူ မျိုးအ
သရေ ယုတ်အောင် မလုပ် ဖို့တောင်း ပန်ပါတယ် ဒါ မှ မ ဟုတ် ဒီ စာကို ဖတ် ပြီးဆဲ ခြင် တယ် ဆို ရင် လဲ
ဆဲ နှိူင် ပါ တယ်comment ပေါ်မှာတော့sorry နော်ဒီ mail မှာဆဲနှိူင် ပါတယ် အမိ ၊အဖ တွေ ကိုထိ ခိုက်
စေ ခြင် ပေါ့ Dave ရိုက်ချက် မှာမျောနေကြ တာ ငြင်းခုံနေ တာ Dave ကတော့သူ့ရိုက် ချက်အောင် မြင် မှူ့အ တွက်
ဂုဏ် ယူနေလိမ့် မယ် ရီနေ လိမ့် မယ် ခင်ဗျားတို့ မရှက်ဖူးနော်။ twashtoo@gmail.com ကျွန်တော် mail ပါ
wunna March 29, 2010 at 8:27 am Reply
တစ်ခုလောက်အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒီ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ဓါတ်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကွန်မန့်တွေမှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့အသုံးအနှုံးတွေ ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ –ီး၊ -ိုး၊ အဲလိုမျိုးတွေကို မော်ဒရိတ်လုပ်ထား ပေမယ့်မယ့်လည်း၊ အနက်ရောင် တစ်ကြောင်းသာ ဖြတ်ထားသဖြင့်၊ အထင်အရှား ဖတ်လို့ရနေပါသေးတယ်။ ထိုကဲ့သို ကွန်မက်များကို ရိုင်းစိုင်းသော အသုံးအနှုန်းများကို လုံးဝ မမြင်ရအောင် ဖျက်ပေးလျင်ဖြင့် ပိုမိုသင့်တော်မည် ထင်ပါတယ်။
မြတ်ကိုကို March 29, 2010 at 10:02 am Reply
တော်တော်ဆိုးတာပဲနော် မင်းအဲလိုလုပ်တာမင်းမရှက်ပေမယ့် ကြည့်တဲ့မိန်းကလေးတွေရှက်နေကြမှာနော်…… မိန်းကလေး
ht March 29, 2010 at 3:30 pm Reply
မင်းလျှောက်မပြောနဲ့။စစ်အစိုး၇ကို လိုလားတဲ့ကောင်။မင်းအဖေက ဗိုလ်ချုပ်လား။မင်းမှာ နှမမ၇ှိဘူးလား။ဟေ့ကောင် ၇ှင်း၇ှင်းပြော၇၇င် ထမင်းမစားရဘဲလူဖြစ်မလာဘူးကွ။
ht March 29, 2010 at 3:34 pm Reply
ဒီိမိုကရေစီ ရရင် မင်းတို့ကောင်တွေ ရှေ့နေကိုသာ အိမ်မှာအမြဲတမ်းခေါ်ထား။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုပေါ့ကွာ။ဟေ့ကောင် ခေတ်မှီအောင် နေပြည်တော်က မင်းသုံးပါးမျက်နှာမှာ နေကာမျက်မှန်သွားတပ်ပါလား။
ko doke kyiii March 30, 2010 at 8:11 am Reply
ngapock March 30, 2010 at 5:46 pm Reply
i want,very short next time.
ခင်ကြီးကျယ် March 31, 2010 at 7:08 am Reply
ဒီလို ၀တ်ပြလိုက်လို့ နာမည်ကြီးချင်ကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီနာမည်ကြီးမှုကတော့ ကောင်းသော နာမည်ကြီးခြင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်စေချင်ပါတယ်
intro March 31, 2010 at 11:06 am Reply
သူလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိမှာပေါ့ကွယ်
တောသား March 31, 2010 at 4:05 pm Reply
သောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး.. ဒါနဲ့ များ… နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလုပ်နေသေးတယ်… ချောက်ချက်ကိုရှိဝူး…… နာ ပေါလိုက်ယင် မကောင်းပဲရှိတော့မယ်…. အဲ့လိုတိုတိုလေးဝတ်ချင်ရင်….. သူများနိုင်ငံသွားပါလား…. ရွလိုက်တာ… မင်းမို့လို့ မရှက်တတ်တာ .. ကြည့်ပါဦး…… အောက်က ငနဲသားတွေကလည်း.. စားတော့မတတ်ပဲ.. ကြည့်နေကြတာ… မင်းဟာကို တော်တော်ကြွားချင်တယ်ပေါ့လေ.. လာခဲ့လိုက်…စမ်း ….ဘာ….
phothiha April 1, 2010 at 11:24 am Reply
၀ုတ်တယ်…သောက်ရှက်လဲမရှိဝူးနော် … ဒါနဲ့များ အဆိုတော်တဲ့ ဟိဟိ ဘယ်လိုများယုံရမှာလဲနော်
JOKEr April 1, 2010 at 12:21 pm Reply
loe chin sayar kyi for mandalay ka belatwep
ခခ April 2, 2010 at 3:32 am Reply
မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ.မေးရောက်လာလို.ဖွင်.ကြည်.မိပါတယ်…. အ၇မ်းကိုဆိုးဝါးလွန်းနေပါတယ်….၀ိုင်းစုကိုအရင်က ကြိုက်ခဲ.ပေမယ်… အခုတော. ရွံသွားတယ်..လေ………ခေတ်မီတာလည်းအတိုင်းအတာနဲ.ပေါ.နော်… မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်နဲ.ဒါမျိူးမဖြစ်သင်.ဘူးလို.ထင်ပါတယ်…
မင်းကိုချစ်တဲ့သူ April 2, 2010 at 3:43 am Reply
၀ိုင်းစု ရေ ..မင်းကို ငါ သိပ် အထင်ကြီးခဲ့တယ် …
မင်း ခတ်ရေ စီးကို အမှီလိုက်ပါ ..ခတ်မှီပါ …ဒါပေမယ့် ခတ်မဆန်ပါနဲ့ ..ခတ်ရေစီး ကို ဆန်မတက်ပါနဲ့ …
ဒါပဲ ပြောချင်တယ် …..တောင်းဆိုတာပါ ..တောင်းဆို ကြည့်တာပါ….ခတ်မှီယုံပဲံ လုပ်ပါ..မင်းက မြန်မာ ဆန်ပြီး သား…ကောင်မလေး မို့လို့ပါ…
theinzawoo April 2, 2010 at 10:36 am Reply
ုright April 2, 2010 at 1:30 pm Reply
ကျွှန်တော်လည်း မြန်မာတစ်ယောက်ပဲ မင်းတိုလည်း command ပေးတာပေးပေ့ါ ဝေဖန်ပေါ့ နအဖ နဲ့ဘာဆိုင်လဲ မင်းတို့အဲလောက်မကျေနပ်ရင် နိုင်ငံေ၇းဆိုဒ်ထောင်ပြီးေ၇းပါလား 😛 မော်ဒယ်မတစ်ယောက်ရဲ့ command ထဲမှာ နအဖ မထည့်သင့်ဘူး ကျွှန်တော်ပြောတာ ဘယ်သူကိုမှမထိခိုင်စေချင်ဘူး မင်းရဲ့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးဆွေးနွေးဖို့ ငါမှာ အချိန်မရှိဘူး မင်း gmail ဖော်ပြရအောင် ငါချက်တင်ထိုင်ပြီး ဆဲနေတဲ့ ကောင်မဟုတ်ဘူး မင်းတို အမှန်တရား ကိုဝေဖန်တတ်ဖို့ပဲပြောတာ မင်းသုံးပါးမျက်နှာ နေကာမျက်မှန်သွားတတ်ရအောင် မင်းတို့အဘိုးတွေအသက်ပေးပြီးတော့ နိုင်ငံတည်ထောင်လာတာ မရိုင်းနဲ့ ဒါပဲပြောချင်တယ်။။။ နောက်တစ်ခါ command ရေးရင် မော်ဒယ်ကိုပဲ ဝေဖန် မဆိုင်တာမပြောနဲ့ ။…….
ကြည့်မရ April 2, 2010 at 3:04 pm Reply
ချော်တော်ပြောင် April 2, 2010 at 5:30 pm Reply
တော်တော်ကို မကောင်းပါဘူးဗျာ တကယ်ပါ မြန်မာမိန်းမလေးလုပ်နေပြီးတော့ ပေါ့…ဟုတ်ကြပါတယ် နအဖနဲံတော့ မဆိုင်ကျပါဘူး ကိုယ့် လူတို့ ရာ သူတို့ ရှိလို့ လဲ ငါတို့ အေးဆေးစွာနေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းစမ်းပါ ..ကိုယ့် ထက်မြင်နေတဲ့ ဟာတွေနဲ့ မနှိုင်းပါနဲ့ လားဗျာ မတူရင်မတုပါနဲ့ တဲ့..ကျုပ်ကြားဖူးတာပါ ဗျာ ကျူပ်က တောသားပါ မီးပျက်တာတော့ ဆိုးတယ်ဗျာ ရန်ကုန်မြိုးကြီးလုပ်နေပြီးမီးလေးမှမှန်အောင်မပေးနိုင်ကျဘူး ..ခင်ှားတို့ လည်း အလကားလူတွေဘဲ …ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ … ..အင်းဆက်အုံးမယ်ဟိုအကြောင်း..မ၀ိုင်းစု ခင်ဗျားအရမ်းရိုင်းတယ် ..ဒီလိုမ၀တ်သင့် ဘူး ….စဉ်းစားပေါ့ ဗျာ ခင်ဗျားလဲ ဦးနှောက်ရှိနေတာဘဲ ဒါပါဘဲဗျာ ………………..
သိကြားမင်း April 2, 2010 at 5:34 pm Reply
အင်း ၀ိုင်းစုရေ…ကြည့် လုပ်ပေါ့ ကွယ် မင်းမုဒိန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ တော့ မကြားပါရစေနဲ့ နော် ……ဟဲ..ဟဲ … မင်းမိဘတွေ မရှိတော့ဘူးလား ..အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေရော ..သူတို့ မရှိတောင်မှ ညီငယ် ညီမငယ်လေးတွေရော …..အင်း တော်ပါပြီးဗျာ ….ခင်ဗျားက ကျုပ်ရဲ့ လက်နဲ့ တောင်မတန်တော့ ပါဘူး ….
ပိုင်သူချစ် April 3, 2010 at 10:15 am Reply
၀ိုင်းစု ခိုင်သိန်း April 3, 2010 at 1:48 pm Reply
ဟေး….ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော တို့ ကတော့ စောက်ဂရု မစိုက်ဘူး….တို့ ကို စပွန်စာ ပေးထားတဲ့ဘဲတွေမှ တစ်ပုံကြီး…နင်တို့ အားမပေးလဲ ငတ်သေမသွားဘူး စောက်ဆင့်မရှိတွေရဲ့..
Shwenatthar April 3, 2010 at 2:00 pm Reply
You have to stimulate all guys by wearing short skirt. As GUY , we have nothing to say about your dressing code.
But sometime and somewhere, be careful about your way of dressing. Haha…………
nga mu April 3, 2010 at 3:11 pm Reply
muu nay tae time mhar ad de lo pone natanar york lar yin tot
mel minn thay yin thay
mel minn ma thay yin dot nga mu pal thay mhar pal
ma yone yin test kyi lod ya bar del
sait ma soe nat nga mu ka der myo dwe ko muu nay yin
lone wa thee ma khan naing bu
muu nay tae time dwe mhar po soe lod par 😀
Jerry April 3, 2010 at 4:18 pm Reply
international မှာ ဒီလို ဝတ်တာ စာမဖွဲ့ ပါဖူး
bigcat April 3, 2010 at 8:51 pm Reply
Notabig deal. Why not? By the way, why do you let substandard comments for this comment box. Is thisakind of promotion to this website?
ပေါက်ကျော် April 4, 2010 at 6:25 am Reply
ဘုန်းကြီးကျောင်းသား April 4, 2010 at 11:53 am Reply
မင်းတို့ဟာတွေကလဲ ဓါတ်ပုံလေးတပုံ ပြမိပါတယ်..နအဖတွေရောနိူင်ငံရေးတွေရော
ဘာတွေလဲကိုမသိတော့ဘူး ဆဲတာတွေရောဆိုတာတွေရော ရှုပ်ရှပ်ကို ခပ်နေတော့တာပဲ …..
နင်ကလဲနင်ပဲ ……ပြောအောင်လုပ်တာကိုး 😀
နတ်ဆိုး April 4, 2010 at 1:06 pm Reply
ဘောပါလား မင်းကလဲေ၇ာဘာလဲ မြန်မာမဟုတ်ဘူး စောက်သုံးမကျတဲ့မင်းလိုကောင်းမျုိုမြန်မာပြည်မှတောင်မထားသင့်တဲ့ကောင်းကွ
lathakhin April 6, 2010 at 1:52 pm Reply
ဟေ့ နတ်ဆိုး ဆိုပါလား …
အိုင့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ နာမည်တူတယ် သိလား …
ခိုင်စိုးလင် April 4, 2010 at 4:19 pm Reply
တကယ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ အ၀တ်အစားတွေကိုဖက်ရှင်ထွင်ဝတ်ရာမှာ သူများကို ပြချင်တာ ဆွဲဆောင်ချင်တာထက် ၀တ်ချင်လို့ သဘောကျလို့ ၀တ်တာများပါတယ် အသံကောင်းပြီးသား အဆိုတော်က အတိုလေးဝတ်ချင်လို့ သူနဲ့ လှမယ်ထင်လို့ ၀တ်လိုက်တာဟာ လိုအပ်တယ် မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတစ်ခုကို ထည့်ရေးသင့်တယ်လို့တောင် မထင်ပါဘူး ၀တ်ချင်တယ် သဘောကျတယ် ၀တ်လိုက်တယ် ဒါပါပဲ မြန်မာတွေ အမြင်နဲ့ မုဒိန်းမှုတွေဟာ ဒါကြောင့်လိုလို မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပေါင်လေးပေါ်လိုက်ရင်ပဲ တပ်မက်စိတ်နဲ့ပဲ ကြည့်ရတော့မလိုလို ဖြစ်နေသေးတာဟာ အစစအရာရာ ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ သဘောကို ပြနေတာပါပဲ ခေတ်တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ ၀တ်တယ် စားတယ် ဒါကို ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုလို သတင်းသမားအနေနဲ့ ရေးထားတာကိုကလည်း အတော်ကို စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနေသလားလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီ့ထက် အရေးကြီးတာတွေ အများကြီး ရေးစရာ ရှိပါတယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် စကပ် အတိုဝတ်တာလောက်ကို သတင်းလုပ်ရေးနေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး ထင်တာပဲ
zayarwin April 5, 2010 at 4:29 am Reply
ကျွန်တော်တို စိတ်ကို ထကြွအောင်လုပ်နေ သလိုဘဲ လိုထင်ပါ တယ်….
ghostflik April 5, 2010 at 2:17 pm Reply
ခိုင်စိုးလင်ခင်ဗျားလေသံကိုနားထောင်ရတာမြန်မာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မဟုတ်သလိုပဲ။ ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေရင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ကြမှာပဲ ။ဒါAMERICAမဟုတ်ဘူးလေ။AMERICAမှာမထူးဆန်းပေမဲ့ဒီမှာတော့ရိုင်းပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှူ့ကိုထိမ်းသိမ်းတာဘယ်လူမျိုးမဆိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။AMERICAမှာဆိုရင်ခင်ဗျားမှန်ပါတယ်။
မျိုးကြီး April 5, 2010 at 9:04 am Reply
၀ိုင်းစု စကပ် ဒီထက်ပိုပြီး တိုခဲ့မယ်ဆိုရင် စင်အောက်လူများ စင်ပေါ်ရောက်လာပါမယ် ခင်ဗျား ဟိဟိ
May Phyo April 5, 2010 at 10:26 am Reply
ရိုးရိုးဝတ်လည်းလှတယ် ဆန်းဆန်းဝတ်လည်းလှတယ် ဘာမှမ၀တ်ထားရင်ပိုတောင်လှတယ်
ဟီးဟီး အင်တာနက်သီချင်းထဲကလိုဖြစ်နေပြီ ၀ိုင်းစုရေ ကြည့်လည်းဝတ်ပါဦး
wannatun April 5, 2010 at 1:24 pm Reply
ဒီမှာ တစ်ချို့ တွေရိုင်းတာတွေ့ရပါတယ်.. gay website တွေမှာ ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ.. အဲဒါတွေကို.. အယ်ဒီတာအနေနဲ့ ဖယ်ပေးစေလိုပါတယ်.. ကြာရင် image ကျသွားနိုင်တယ်.. တစ်ဘက်ကလည်း.. လွတ်လပ်မှု ရှိစေချင်တာကို သဘောပေါက်ပါတယ်.. ဒါမဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာမျိုးကိုတော့ သတိပေးစေချင်တယ်..
ကပ္ပိယ April 5, 2010 at 2:53 pm Reply
Moe Ko April 5, 2010 at 4:25 pm Reply
I amaMyanmar who is currently staying outside Myanmar. By looking at comments above, I feel sorry for Myanmar and its people because they are so outdated. Also, we Myanmars should maintain the good reputation of being polite, and we also pay respect to human rights. It’s totally none of our biz to say about others. And they are celebrities and it’s no strange to dress up like this in this modern world foracelebrity. Style ofacelebrity cannot be the same as an ordinary girl and I guess an ordinary girl (if she isagood girl) may not wear like this. But for Wine Su, she isacelebrity. No need to insult her.
Bagyi April 5, 2010 at 11:55 pm Reply
၀ိုင်းစုဆိုတဲ့ကောင်မတကိုယ်လုံးချွတ်ပြရင် မကြည့်မဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူး။ လူညာတွေ
တီမ်နှိုင်းထက် April 6, 2010 at 2:41 pm Reply
အဖ April 7, 2010 at 1:34 am Reply
ဟားဟား နအဖ ဆိုတာမင်းအမေရဲ့လင် မင်းရဲ့ပထွေးဟုတ်တယ်ဆို comment တွေဆက်ရေးပေးကြပါ။
နောက်ပြီး နအဖ ထိလို့နာနေ ရင်မင်းဟာ ကြံ့ဖွတ် လား၊စွမ်းအားရှင် လား?မင်း အမေကို …….တဲ့နအဖလား?
ဟေ့ကောင်ရွှေဝါေ၇ာင်အချိန်က မြန်မာတမျိုးသားရဲ့ဘုရားသားတော် လိုရဟန်းတွေကို သတ် ခဲ့တာ မင်း အမေကို…..
တဲ့ပထွေးတွေ ဘက်က ကာကွယ်ပြောနေတယ်ကောင်တွေ လးလး လး ဘဲလူဆိုတာ လွတ် လပ်စွာပြောနှိုင်တယ်ကြာတယ်
သ တ္တိရှိ တဲအကောင် နအဖ လူမင်းတို့ကောင်တွေ လာခဲ့ဟေ့ ငါကျောက်မြောင်းသား ကွ သီတာ လမ်းကို လာခဲ့…
ထောင် ဆို တာငါမကြောက် ထောင်ဟာခြင်ထောင်ဘဲ …နအဖ အောက်ဆွဲ မင်းတို့လို မဟုတ်ဘူး ရေးမယ်comment နအဖအကြောင်းမင်း တို့သာ
နအဖ ကိုမင်း အ မေ ပေး ထားတာ မှန်ရင်ဆက် ပြီးငါကို တိုက်ခိုက်နှိူင်တယ်…အပြင် မှာယှဉ်ချင်တယ်ဆို လဲချိန်းလိုက်
နေရာ၊အချိန်မရွေးဘူး…….လးလးလးလးလးလ ဘဲ….၊။ငါ ညီ မလိုမြန်မာမ လေးတွေအားလုံးသဘောထားတယ်..
မင်း ပထွေးတွေ လို ငါ မဟုတ်…..မျိုးမစစ်ရဲ့…။ ဒါဟာနှိူင်ငံရေး လှူပ်လှူပ်ရှားရှား ဖြစ်အောင် ဆွ တဲ့နအဖ သဘော နဲ့မင်း တို့ အ တူတူ….
htoothu April 7, 2010 at 10:23 am Reply
aungsammin April 7, 2010 at 2:47 am Reply
ဟိတ်…လူတွေဦးနှောက်ထဲထည့် စရာမလိုပါဘူးဗျာ မိန်းမတစ်ယောက် စကပ်အတိုဝတ်ပြလို ကမ္ဘာပျက်တဲ့အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ…ဝိုင်းစုကသူရှာစားတတ်သလိုရှာစားတာနေပါလိပ်မယ်….
kokotunnai April 7, 2010 at 3:26 am Reply
ဟုတ်ပါတယ်koaungsammin ရေ…သူရှာစားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ ..သူ့ ကိုကြည့် မိလို့ ကျုပ်တော့လျှာလဲထွက်နေပြီ…အသက်ရှုရတာခက်တယ်…..အိမ်ကညီမလေးတွေကိုပဲဆုံးမရတော့မယ်….ကျားလျှာထွက်အောင်မလုပ်ရဘူးလို့ …ကျားအသက်ရှုကြပ်ရင် ပုဒ်မ..အကြီးကြီးကိုဧဒင်ဆိုတဲ့ခြံကြီးမှတ်လို့ ရေသောက်ဆင်းလာလိပ်မယ်လို့ …..
kokotunnai April 7, 2010 at 3:50 am Reply
လူတွေပြောတာများလို့သေချာကိုထပ်ကြည့် မိတယ်…ဟုတ်ပဗျာ သူ့ ခမျာဘဝကိုရွံ့ ရွံ့ ချွန်ချွန်ကိုဖြတ်သန်းပြီးခက်ခက်ခဲခဲကိုရှာစာနေရတာပဲ မယုံရင်သူ့ ဒူးကိုကြည့် ပေါ့ ဧဒင်ခြံကရခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေကသက်သေပြနေသလိုပါပဲ…..
ko doke kyiii April 7, 2010 at 9:52 am Reply
ဒီထက်ပိုပြီးတိုမယ် ဆိုရင် ဘာပြောကောင်းမလဲ,,ရေ မ ဆေး ဘူး ကွာ…:P:P
shwezin April 7, 2010 at 10:51 am Reply
intro April 7, 2010 at 11:59 am Reply
အော်… ၀ိုင်းစု.. ၀ိုင်းစု… ဂလု.. ဂလု
တီမ်နှိုင်းထက် April 7, 2010 at 5:03 pm Reply
phyo April 8, 2010 at 10:28 am Reply
aww lu twae lutwae thu myar ko ma kg pyaw pho pal kyi kya tal
ko bar thar ko apyit so tarma myin kya bue thu myar ko 1khar py yin ko ka bal nat yout yat py chin ko khan ya ma lae ma ti bue naw take care
nat soul April 8, 2010 at 3:21 pm Reply
သူဘာသာ သူ ၀တ်တာနင်တို့နဲဘာဆိုင်လဲ ဒါပေမဲ့ ကောင်းပါတယ် ……..နော် ၀ိုင်းစုရေ .
အဖမျိုးချစ် April 9, 2010 at 1:28 am Reply
ဟေ့ကောင် မင်း က ထောင်တွေပိုလို့စုံ ပါ လား ငမိုက်သားရဲ့။နအဖက ရဟန်းတွေ ကိုသတ်ခဲ့တာတော့မင်း လက်ခံတယ်ပေါ့ ။
အားလုံးကိုပြောမယ် အခု ဝိုင်းစု ကို တိုက်နေ တာ မဟုတ်ဖူး…။အမှန်တရား ကိုမြတ်နိုးသူ သတ္တိရှိ တဲ့ လူတွေcomment ရေးကြပါ။
အာဏာနဲ့ လာမခြိမ်းခြောက်နဲ့ လုံးဝဘဲ…sorry ဘဲကြီး…။comment တိုက်ပွဲ ဖေါ်လံဖါး ခွေးဝဲစားတွေ အတွက်စတင်ပြီ
ပါ ဝင်ကြ ပါ..။
ဟေ့လူ အလှူအိမ် ဖိနပ်ခိုး၊မှူ့ နဲ့ ချီးတွေထောင် ထဲစား ခဲ့ တာတွေမေ့လိုက် ပါတော့ ဟားဟား။။။။မင်း လဲ လိပ် စာ အတိအကျပေး
ိလို က် ထမင်း စား ဖို့ မျက် နှာရှာ မရစေ ရဖူး …….။
myanmarpyithar April 9, 2010 at 7:57 am Reply
bar tway mhan ko ma thi tot par bu . bar mha ma hote te min tha mee ta yaughtakyaung koayae ta gyi lote nay kya tar. nai nganatwak bar mhaakyoe ma shi par bu.
banban April 9, 2010 at 8:12 am Reply
မန္တလေးက မိန်းအဆောင်တွေနားမှာ သွားကြည့်… ဒီထက်တောင်ပိုတိုသေး… အတိုလေးတွေနဲ့… ဆိုင်ကယ်တွေနောက် ခွထိုင်သွားကြတာ…
ဗိုလ်ချုပ် April 9, 2010 at 9:18 am Reply
အဖမျိုးချစ်ပြောတာကြိုက်တယ် ….. ဘာလည်း နအဖ စောက်ဆင့်မရှိတာတွေ …. ဘာလည်းနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု …. အားလုံးကိုဖျတ်ဆီးနေတာသူတို့ပဲ ….
မောင်တင့်တယ် April 9, 2010 at 9:20 am Reply
ssa March 3, 2012 at 2:00 pm Reply
viola April 9, 2010 at 6:08 pm Reply
ပြောထားတာ ကြောက်စရာကြီးပဲ တော်ရုံပြောလဲရပါတယ်နောက်ပြီး အွန်လိုင်းကပြောနေလဲ ဟိုကကြားရမှာမ မဟုတ်တာပဲ
မိန်းကလေးရော ယောကျာ်းလေးပါ ကြည့်တဲ့ website မှာရိုင်းပျတဲ့စကားတွေတင်ထားတော့ မကောင်းဘူးပေါ့
cpanel မှာ restrict တွေ ပြင်ချင်တယ် ထည့်ချင်တယ် ဆိုပြောနော် free ကူညီပေးမယ်
အဲ့ဒီစကား ရိုင်းရိုင်းကြီးတွေ ညစ်ပတ်တာတွေ မမြင်ရရင် ပြီးရေား(
banban April 10, 2010 at 4:58 am Reply
ရှေ့ကနေ စံပြလုပ်ပီး.. ၀တ်တဲ့သူတွေကလည်း ၀တ်ပြ… နောက်ကလိုက်ဝတ်တဲ့သူတွေကလည်း အဖေတွေ..အကိုတွေ တစ်ခြားယောက်ျားလေးတွေအတွက် အမြင်မသင့်တော်တာကို မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ဘဲ ၀တ်… ဒါမျိုးတွေကို မိဘမောင်ဘွားတွေက သေသေချာချာဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ပြုပြင်သင့်ပြီ။ ခေတ်မီမီနဲ့..လှလှပပလေး ၀တ်လို့ရပါတယ်….ခေတ်မလွန်ကြပါနဲ့။
တိမ်နှိုင်းထက် April 10, 2010 at 7:46 am Reply
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) February 20, 2012 at 8:14 pm Reply
ဟုတ်ပါတယ်ကိုတိမ်နှိုင်းထက် ခင်ဗျားပြောတဲ့စောက်ဆင့်ဆိုတာထဲမှာခင်ဗျားမပါဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာ
ပီတိဖြစ်ရပါတယ် အဲဒီထက်နိမ့်ကျတဲ့ စကပ်တိုတိုများရဲ့အောက်ကိုမရောက်ပါစေနဲ့လို့လည်း
ဆုတောင်းပဏ္ဏာပြုလိုက်ပါတယ် ။ ရွာသားတို့ရေမြို့ကြီးသားကြီးကို သံပုံးခေါက်ခံရတယ်ဆိုတာ
ဘယ်လိုဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်ကြပါနော့် ဆားတော့မပက်ပါနဲ့ တောင်ပေါ်သားတွေဆားနှမြောတတ်
သူကြီးနှစ်လုံးပြူးကချေးကပ်နေသလားဗျို့ ။ မြန်မြန်ပစ်ပါတော့။
င၇ဲမင်း April 10, 2010 at 3:30 pm Reply
၀ိုင်းစု ၀တ်တာ အကြောင်းပြုလို. command တွေများလိုက်တာ. တချို.များဆိုေ၇း၇င်းနဲ. သခင်ကိုထိတော. ထ ဟောင်ပါလေေ၇ာဗျာ. ဟိဟိ
ဒါနဲ. ၀ိုင်းစုလေး ကြည်.၀တ်ဦးနော်……
အဖမျိုးချစ် April 10, 2010 at 7:36 pm Reply
မြေ နှိူင်း ထက် ခင် ဗျား ဒီလောက် ဒေါ သထွက်မနေ နဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ယဉ်ကျေး စွာ စကားပြောမယ်။
ခင်ဗျား လဲအရာရှိ တယောက်ဖြစ် ရင် ဖြစ်ရင် နှိူင်တယ် တယောက် နဲ့တယောက် နိုင် လိုမှူ့နဲ့ပြော ကြတာကျုပ်လဲ လမ်းဘေး ကအကောင် မဟုတ်ဘူး
ရုရှားမှာ ကွန်ပြူတာကျောင်း တက်နေတာ ခင်ဗျား လဲသဘော ပေါက် စမ်းပါ…..ခင်ဗျား Email ပေး ရင် ခင်ဗျား ဟာဘယ် သူဖြစ်လဲဆို
တာ ပြောပြမယ် ok?
မြင့်မြတ် April 11, 2010 at 2:33 am Reply
သားသားကတော့ မမ ၀ိုင်းစုကို ကြိုက်သွားပြီး။
zaw aung April 11, 2010 at 11:04 am Reply
သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း စားပုံအရပြောရရင် တော့ နစ်နာစရာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာ ဘဲ… ဘာဘဲပြောပြော လက်ဦးဆရာကတော့…မိဘဘဲမဟုတ်လား.. ငယ်ငယ်ကတည်းက ယဉ်ကျေးမှု့ အသိတရားလေးနဲ့ယှဉ် ဆင်ခြင်တုံးတရားလေး ရှိရင်တော့ အခုလောက်မဆိုးလောက်ဘူးထင်တာဘဲ.. လူများထက် နာမည်ကြီးအောင် လူများထက်ဟော့အောင် ၀တ်စားရမယ်လို့ သူ့ပရိတ်သတ် ဆယ်ကျော်ကောင်မလေးတွေ တွေးထင်သွားခဲ့ရင်.. နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမှာတော့……… အနုပညာသည်တွေဟာ ပရိတ်က အမြဲစောင့်ကြည့်ခံနေရတာပါ..ကိုနာမည်ကြီးဖို့ မိုးဟေကို လို လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ သိက္ခာမရှိတဲ့ ထင်ပေါ်မှု့ဘဲ ရမှာဘဲ… အမျိုးသားရေးလက္ခာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး တီဗွီအော်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘယ်မှာများသွားထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေကြပါလိမ့်… ဟော့မှ အရည်အသွေးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး………..
kotoegyi April 11, 2010 at 2:29 pm Reply
bar pyaw pyaw toegyi do. ka top lee gyi pa’ tang tang lar ta’
tat ca’ pyaw tar
thu. do. a’ lo wit lay toegyi ka lee gye lay pa’
ha’ ha’ ha’
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) February 20, 2012 at 8:21 pm Reply
ကိုတိုးကြီးရေ ရှမ်းပြည်ကလုပ်တဲ့ငရုပ်ဆုံများမာသလားမမေးနဲ့သံဆုံတွေဗျ ခင်ဗျားကို
ခင်ဗျားအားရင် ကျုပ်တို့ရှမ်းပြည်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ နွားတွေသက်သာအောင်ပေါ့။
Ko Kyar Ye April 11, 2010 at 8:27 pm Reply
ကိုတေဇာ April 12, 2010 at 8:24 am Reply
အင်း … ဝိုင်းစုလုပ်တာနဲ့ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် နအဖ ကော်ဆဲတဲ့သူကဆဲကုန်ပြီ
ဒီနေရာမှာ ကွန်မန့်ပေးတာဘယ်သူ့ကိုလဲ ဝိုင်းစုကိုလား နအဖကိုလား
မဆီမဆိုင် ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာ မျက်စိနောက်တယ်ဗျာ … အက်ဒ်မင်များ မော့ဒ်များအနေနဲ့လဲ
တစ်ချို့ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေပါတဲ့ ကွန်မန့်မျိုးကို ဖျက်ပစ်သင့်ပြီ
နာမည်ကတော့ ရတနာပုံဂေဇက်တဲ့ ရေးချင်ရာရေးနေကြတဲ့ကွန်မန့်တွေကြောင့် အဆင့်ကိုမရှိတော့ဘူး
တီမ်နှိုင်းထက် April 12, 2010 at 3:23 pm Reply
မင်းကရုရှားမှာကွန်ပျူတာတက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်?မင်းဘယ်အတွက်ကြောင်.မင်းအဲဒီ.ကိုရောက်နေတာလဲ?မင်းတစ်ခုတော.မမေ.ပါနဲ.မင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးခဲ.တာနော်မင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲကျေးဇူးတွေကိုမမေ.ပါနဲ.မင်းကိုအီးမေလ်းပေးလည်း လီးလုပ်မှာလားမင်းကဒီမှာမရှိဘဲလျောက်ရေးမနေနဲ.စောက်ရူးလေးရဲ.မင်းကဘာ…ရုရှားမှာကွန်ပျူတာတက်နေတယ်စေက်ြရူးဦးနှောက်ရှိတယ်.ကောင်အဆင်.ရှိတယ်.ကောင်ဆိုဒီလိုမျီူးစကားတွေကိုဘယ်တော.မှမပြောဘူးမင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ပဲဘာအတွက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ မင်းသိပါငါဒါပဲပြောချင်တယ် မင်းဆက်ပြီးရေးလည်းငါထပ်ပြောတော.မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီထက်ဆိုးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော.မင်းဘ၀ဟာအဲဒီ.မှာပဲဆုံးနိုင်တယ်ငါပြောပြတာပါ မင်းကိုပြေပြေလည်လည်ပဲဖြစ်ချင်တယ်မျိူးချစ်တယ်.အဖ
editor April 12, 2010 at 9:25 am Reply
အယ်ဒီတာ တယောက်အနေနဲ့ မေးချင်၊ ပြောချင်တာက ..
– Read This Before LeavingaComment ဆိုတာ အောက်မှာတင်ရှိပါတယ်။ဖတ်ကြပါရဲ့လားခင်ဗျား..။ အဲဒါ စည်းကမ်းတွေပါ။
– လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ပေးထားတာ။ (တတ်နိုင်သလောက်)ဖြတ်တောက်စိစစ်ခြင်းမရှိပဲ ရေးသားသူတွေကို စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ လူအများရှေ့ ရေးချင်တာရေးနိုင်အောင် ခွင့်ပေးထားတာကို ဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲ ခင်ဗျား။
– တဦးနဲ့တဦး အယူအဆရေးရာမှာ သဘောကွဲလွဲလို့ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံနေတာမဟုတ်ပဲ အခြေအမြစ်မရှိ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေတာတွေဟာ နှစ် ၁၀၀၀ ကျော်ယဉ်ကျေးမှုသက်တမ်းရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတဦးပီသတာပါလားခင်ဗျား။
– ခရစ်ယန်၊ အစ္စလမ် ဘာသာတွေမှာ ကိုယ်လုပ်တာကို ဘုရားသခင်၊ အလာအရှင်မြတ်သိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်စောင့်နတ်ခေါ်ရမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကံက သိပါတယ်။
– အနည်းဆုံးတော့ ၀က်ဘ်ဆိုက်အက်ဒ်မင်က ရေးသူဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ဒေသ ခန့်မှန်းနိုင်တာမို့ အဲဒီဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာတွေရေးနေသူဟာ တနေ့နေ့မှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်(ဒါမှမဟုတ်) အကြီးအကဲ၊ (ဒါမှမဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်(ဒါမှမဟုတ်) နာမယ်ကျော်တဦးဖြစ်လာပြီး လူတွေရှေ့ ရောက်လာရင် အခုရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ပြန်ရှာ၊ ထုတ်ဖေါ်ပြီး မီဒီယာပေါ်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရေးသားထားတဲ့ညစ်ညမ်းစာတွေ၊ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေကို “မြန်မာတုိ့အကြောင်း”ဆောင်းပါးတခုေ၇းရာမှာ မှီငြမ်း(သက်သေ)အဖြစ်လည်း အသုံးပြုချင်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မီဒီယာရဲ့ အလုပ်ပါပဲ။
စာလာဖတ်သူတွေ၊ ရေးနေသူတွေကို လေးစားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်စေချင်တာတွေ မှတ်ချက်ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ နားထောင်ဖတ်ပါ့မယ်။
အခုထိတော့ နေ့စဉ် လူ ၇၀၀ ကျော်ကျော်ပဲ လာဖတ်ကြတာရှိပါတယ်။ အင်မတန်နည်းသေးတာမို့ (မှတ်တန်းကျန်ရစ်အောင်)ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားဦးမှာပါပဲ။
လုံးဝ မနှစ်သက်တဲ့ ကွန်မန့်တွေကို Rating စံနစ်နဲ့အမှတ်ပေးနိုင်ကြတာမို့ (-) (အနှုတ် – လက်မအောက်စိုက် )များများပေးလိုက်ရင် ဖြုတ်ပစ်ဖို့စဉ်းစားပါမယ်။
အခု အပေါ်က မှတ်ချက်ေ၇းပေးသွားတဲ့ ကိုတေဇာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
yourtruelyflame April 12, 2010 at 4:14 pm Reply
i am staying outside the myanmar foralong time and already been to all over the wrold.
according to my experience, every country has their own culture, keep maintaining.
for example, every body ( even england & other country ) like design of diana because she was gracious. dressring is showing the behaviour/attitude of their mind.
especially, most of prostitude are wearing like wine su khine thein in western ( some east country also) country.
so, she should know what she is, depend on what she want to be.
she wants to be famous gracious or she want to be prost?
it’s her choice, also all myanmar girls choice.
မယုံနှိုင် ပါ April 13, 2010 at 1:01 am Reply
နိုင် ငံတနိုင် ငံ မှာယဉ်ကျေးမှူ့ ဆိုတာရှိ တယ် USမှာ ကျောင်း နေတယ်ဆိုဝတ်ခြင်တာ ဝတ်လို့ရတယ်ထင် လားမြန်မာမှာ
ကာလံဒေသံ ဆိုတာရှိတယ်ရှေး သုံး လဲမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလဲမလွယ်နဲ့ တဲ့စကားပုံ ဟာအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဖူး အခု
ကျွန်တော် တက်နေတဲ့ ကော လိပ်မှာ လူမဲတွေရဲ့ Hip Hop styleဘောင်းဘီဖင်အောက်ရောက်တဲ့ပုံ တွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါဖူး။မိန်းကလေးတွေ ဆို ရင်ရင်သားကြီး
တွေလှစ်ဟတဲ့အကျီမျိုးတွေ US ကျောင်းတွေကလုံးဝလုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။ဆိုတော့ USလိုလွတ်လပ်တဲ့နှိူင် ငံတွေတောင်ယဉ်ကျေး မှူ့ရှိနေ ရင်
မြန်မာပြည်မှာ ဆို ရင် ဘယ် လို နှိုင်းယှဉ်ကြမလဲ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပေါ့နော်……သားသမီးမကောင်းမိဘခေါင်း….ပြည်သူမကောင်း
nyi April 17, 2010 at 4:42 pm Reply
အားလုံးကို တစ်ခုတော့ ပြော်ချင်ပါတယ်..။ အမှန်တရားကို အမြင်ချင်မတူအောင်ဝေဖန်တဲနေရာမှာရိုင်းစိုင်းတဲစကားလုံး မပါသင်ပါဘူး။
အ၀တ်စား ယာဉ်ကျေးမူမရှိ တာလေးတွေဆုံးမတဲနေရာမှာ …။
ကိုကိုယ်တိုင် ယာဉ်ကျေးမူမရှိအောင် စကားလုံးကြမ်းတွေမပြော်သင်ပါဘူး။။
တချို ရေးပါတယ် နှမချင်မစာနာဘူးတဲ..။
ရာစုသစ်တွေလဲပြောင်းလဲ လားတော့မယ်..။ နောင်တစ်ချိန် မြန်မာယာဉ်ကျေးမူပြောက်သွားမှားစိုးလိုပါ…
ဘာပဲပြော်ပြော် ..ကျားဆိုတာ သက်သတ်လွတ်မစားပါဘူး….ပြရင်တော့ကြည်မှာပဲ….။
kochit April 18, 2010 at 4:39 am Reply
don’t worry she’d cover very nicely by underwear to her main point n tell her any problem call to me http://www.pa pa than shwe.com
konlive9 April 19, 2010 at 7:45 am Reply
ဘဲမှီးး April 19, 2010 at 8:29 am Reply
ချစ်ဆရာ April 19, 2010 at 5:46 pm Reply
အဖေ ရယ် အဖေ့ သမီးကလေ ရပ်ကွက်လူကြီး ခွင့်ပေးရင် ချွတ်တောင်ပြဦးမလားဘဲ အင်တာနက်ထဲကနေမဆဲနဲ့ လေ
အင်းစိန်ထောင်ကို ခွေးဟောင်တာနဲ့တူနေဦးမယ် ကန်တော့နော် sorry sorry
kopauk mandalay April 20, 2010 at 5:16 am Reply
ပြည်သူချစ်တဲ. အနုပညာသမားများ (အထူးသဖြင်.)မိန်းကလေးများသည် လူတစ်ယောက်အနေနဲ.ဖုံးကွယ်အပ်သော အလှကို ဖော်ပြမှလူကြိုက်မယ်ထင်ရင်မှားပါမယ်။
နိုင်ငံခြားမှာတောင် လုံးဝမပြဘဲ နာမည်ကြီးနေသော လူကြိုက်များသော အခုထိ လူအများရဲ.အားပေးခံရသော မင်းသမီး ဂျူလီယာရောဘတ်တို. စန်ဒြာဘူးလော.တို.ကို
ကြိုက်သလိုဖော်လို.ရတဲ. နိုင်ငံမှာတောင် လူအများမမြင်သင်.တာကို မပြဘဲ အနုပညာစစ်စစ်နဲ. လူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ ကိုက အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပါ။
ပြလို.ဆွဲဆောင်သူတွေ သိသင်.တာကတော. ပြတာလေးက မလှတော.ရင် ပြန်ပေတော. မစဉ်းစားနဲ. ဆိုသလို မြောင်းထဲကိုအော်တိုမက်တစ်ရောက်သွားမှာကိုတော.မမေ.စေချင်ပါ။
kopainglay April 23, 2010 at 4:39 am Reply
ပြောကြပါအကိုတိုအမတိုရေ ဒီစာတွေကို ၀ိုင်းစုဖတ်ပြီးရင်တော့ ၀တ်စားတာကိုပြင်မလားထက်ပီးတော့ပဲပိုတိုလာမလားတော့မသိဘူးဗျ သူတော့ အကိုတိုပြောပုံနဲ့ဆို နှုတ်ခမ်းတွေတောင် ပဲ့နေလောက်ပီ
kopainglay April 23, 2010 at 5:44 am Reply
Bagyi ပြောတာတော့မှန်တယ် ဗျ ညီလေးစဉ်းစားတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျ သိရင်ဖြေကြပါဗျာ (ဘာဖြစ်လို့ အရက်ကြေငြာတွေမှာ ကောင်းမလေးတွေကယာကျာ်းလေးတွေကိုမန်တက်အောင်လုပ်ပြနေရတာလဲ)
ပြရင်တော့ကြည့်ကြတာပါပဲ မကြည့်ပဲလက်ခလေးနဲ့အုတ်ထားမဲ့ကောင်းတောင်မှ သူစိတ်ထဲမှာတော့ကြည့်ချင်နေတာပါပဲ
naing.thawzin April 24, 2010 at 4:49 am Reply
ခင်ဗျားကို အားပေးနေတဲ့ ကလေးမလေးတွေ အတွက် နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။
chittutthu April 24, 2010 at 7:16 am Reply
*ရွပိုးထ ကျွန်တော့စိတ်တွေ မရိုးမရွ မိန်းမမြင်ရင်ချစ်ချင်နေတာ ရောဂါ..*
Dr.Dotegyi May 3, 2010 at 7:51 am Reply
NO ! she’s right.cos the weather is SO HOT 🙂 .
Minnie May 5, 2010 at 11:52 am Reply
ပြောစရာတောင်မရှိတော့ပါဘူး ……. 😦
mryto August 7, 2010 at 4:15 pm Reply
ကျန်တော် တို့ မှာ လဲ နှမတွေရှိကြမှာပါဗျာ။ commend ပေး ဝေဖန်တဲ့ နေ ရာမှာ ရိုင်းပြတဲ့ စကားတွေကိုမသုံးသင့်ဘူးထင်တယ်။ ဒီမှာ မိန်းခလေးတွေလဲ ရှိတယ် လေ။
နှမချင်းစာနာပေါ့ဗျာ။nyi ပြော တဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားမယ်ဆို တာ ကို ထောက်ခံ ပါတယ်။အယ်ဒီတာ ပြောသလို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင့်ခွင့်ဆိုတာကိုခုတုံးလုပ်ပီးတော့ ရေးကြတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒီ ကြားထဲ နအဖ က ပါ ကောက်ပါလိုက် သေးတယ်။ ၀ိုင်စုမှ မဟုတ်ပါဘူးမြို့နေ မြန်မာ အမျိုးသမီး တော် တော် များများက ပျက်ဆီးနေကြတာပဲ။မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွား မှာ ကို တော့ စိုးရိမ်တယ် ဗျာ။ သူတို့ လို အကျော်အမော်တွေက ပိုလို့ တောင် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်မှတ်လား။
nyimalay September 9, 2010 at 7:27 am Reply
Lu Tai mar koe. about nae. ko taw. shi kyar tar pae lay. Nyi ma lay Wine Su yae ayin bawa ka nyi ma lay ka thu myar kodlo way phan ke’. bu loh wout pyan khan nay ya tal loh pae ta baw htar lite par. Sin Sin Chin Chin Lal Nay Lite Port. Koe ka actress ta yout so taw. sin chin lite tar kg par tal. Nyi ma lay ka bal lo nay nay hla pyi thar par. Girl chin tg chit par tal. Sin Chin lite port nor. Bal thu tway bal lo pae way phan way phan par i ka taw. nyi ma lay Wine Su ye’. akhaing amar pa yeit thataphyit Shi nay ohn mar par pae. Sin Chin Lite nor Nyi ma lay 🙂
Yin Nyine Nway September 9, 2010 at 10:19 am Reply
tinmin September 9, 2010 at 12:14 pm Reply
ကြည့်လုိရတော့ကောင်းတယ်နော် ဘာရောင်လေးလဲ အသိဝူးနော် မပါရင်လည်းပိုကောင်းမှာနော် ဂလု……
julymoe.boy September 9, 2010 at 2:53 pm Reply
အရမ်းကြည့်လို့ ကောင်းတာပဲ အိမ်ကထွက်တုန်းခွေးဆွဲသွားတာနဲ့တူတယ်
toe2 September 9, 2010 at 3:32 pm Reply
yin min September 9, 2010 at 4:13 pm Reply
DON’T FIGHTING ANY BODY.but i support A BA comment.
leokoko September 9, 2010 at 5:23 pm Reply
yokesoelay September 9, 2010 at 6:23 pm Reply
pyaesone September 24, 2010 at 9:19 am Reply
Han Lin July 27, 2011 at 3:11 pm Reply
တို ပါစေ…သူ့ ကိုယ်သူတော့သူသိမှာပါ….ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက်ဆိုသလိုဘဲ
mzm July 27, 2011 at 3:26 pm Reply
၀တ်ပြတဲ့သူကလဲဝတ်ပြပြီးပြီ တို့ကထိုင်ကြည့်နေရုံလေးပါ စိတ်လျှော့ကြပါလို့
aungnng87 July 27, 2011 at 4:17 pm Reply
လေဒီဂါဂါတို. မီဂန်ဖောက်စ်တို.ထက်စာရင်အများကြီးတော်ပါသေးတယ်။ hotတယ်နော်ဆိုတာလောက်ဘဲ
siamonone August 8, 2011 at 4:12 pm Reply
စကတ်တိုတာ .. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ .. ?
kaung kg16 February 20, 2012 at 4:53 pm Reply
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ February 20, 2012 at 7:30 pm Reply
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) February 20, 2012 at 8:44 pm Reply
အားလုံးကပြောနေကြတဲ့အကြောင်းတွေ ၀ိုင်းစုရေ မင်းရဲ့သီချင်းလေးအတိုင်း လမ်းမကြီးဘေးကိုရောက်သွား
သလားကွယ် ကိုယ်တို့အရပ်မှာတော့လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာ မြောင်းပဲရှိတော့ မင်းသီချင်းကိုကြိုက်ပါတယ်။
လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကိုတော့မကြိုက်ပါဘူးကွယ် ။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ပလက်ဖောင်းတွေရှိတာမို့ မင်းအဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ထင်တယ် အဲဒီဝတ်စုံလေးမင်းဝတ်တဲ့ရှိုးမှာ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့သီချင်း
လေးနဲ့အဖွင့်လေးဖွင့်တာမလား ဟိုလေဘာတဲ့ “အားယားယား……..အားယားယား မောင်ဘာကိုငြင်းမလဲ”
ဒီသီချင်းလေးမလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းဆိုဘူးတဲ့သီချင်းလေးထဲက “ဘယ်တော့လာခေါ်မလဲကွယ်” သီချင်းများ
ဒါမျိုးမလုပ်လဲ မင်းကိုချစ်ပါတယ်ကွာ ကိုယ်တို့အရပ်ဆီလာ ရာသီဥတုအေးတော့မင်းလဲလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရတာ
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ February 20, 2012 at 11:19 pm Reply
ရှမ်းပြည်မှာ ဆိုရင်လဲ ဝတ်အုံးမယ်ထင်တယ်ဗျ။အအေးဒဏ်ကို အံတုပြီး ဖော်ကျချွတ်ကျအုံးမှာဘဲ။
ကိုရီးယားတောင် ဝတ်သေးတာ ဆိုပြီးလုပ်ကြမှာဗျ။
minmin king March 3, 2012 at 12:59 pm Reply
ကြည့်ကောင်းလိုက်တာဗျာ ………….နောက်ထပ်များရှိသေးလား မသိဘူးနော် ………………
snow white April 8, 2012 at 2:37 pm Reply
တိုနိုင်သလောက်တိုနေတာ သူကတော့ပြောကိုမပြောချင်ဘူး ဘာလို့တိုတိုကိုကြိုက်နေလည်း မသိပါဘူး
snow white April 8, 2012 at 2:40 pm Reply
တိုနိုင်သလောက်တိုနေတာ သူကတော့ပြောကိုမပြောချင်ဘူး ဘာလို့တိုတိုကိုကြိုက်နေလည်း မသိပါဘူး တကယ်ဆိုသူတို့ ၀တ်တာလှပါတယ် ဒါပေမယ့်သူတို့ ၀တ်သလိုလုပ်တုဝတ်တွေလည်းရှိ တယ် ကိုယ့်ကိုတန်ဘိုးထားကျပါ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှုလည်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲပါပါတယ် နော်
metallic April 8, 2012 at 3:01 pm Reply
လည်ပင်းကနေ ခြေထောက်ထိ လုံခြုံအောင်ဝတ်ထားပေမယ့်
ကိုယ်နေဟန်ထားကို သဘာဝမကျအောင် အလွန်အမင်း ကောက်ကြောင်းဖော်ထားပြီး
မျက်နှာပေးက ပြီတီတီ (အသုံးအနှုံးရိုင်းသွားရင်၊ စာလုံးပေါင်းမှားသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါရန်)
မခန့်လေးစားနဲ့ မဟာဆန်သူလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်ထားကြပုံပေါက်တဲ့
အရင့်ရောင် April 9, 2012 at 11:16 am Reply
နဲနဲရှည်ရင်လည်း နဲနဲလေးရှည်နေတယ် ဟြေကြမှာပဲနော်
naked April 20, 2012 at 2:43 am Reply